आज निफ्राको १ लाख २१ हजार कित्ता सेयर बिक्री , प्रतिकित्ता कति छ मूल्य ? |
Home शेयर बजार आज निफ्राको १ लाख २१ हजार कित्ता सेयर बिक्री , प्रतिकित्ता कति...
आज निफ्राको १ लाख २१ हजार कित्ता सेयर बिक्री , प्रतिकित्ता कति छ मूल्य ?
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक(निफ्रा) को १ लाख २१ हजार ६४५ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
साताको पहिलो कारोबार दिन कम्पनीको ४ करोड २७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको हो । उक्तदि न कम्पनीको सेयर मूल्य झिनो वृद्धि भएको छ ।उक्त दिन कम्पनीको सेयर मूल्य २.६० रुपैयाँले बढको हो । योसंगै कम्पनीको सेयर मूल्य ३ सय ५१.४० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्- काठमाडौं । पछिल्लो समय आइपीओको गाउँ गाउँमा समेत चर्चा हुने गरेको छ । यसैबीच कार्तिक महिनामा पनि आइपीओ निष्कासन हुने क्रम जारी छ ।